Garowe: Cadde Muuse oo aysan u cubtamin Su'aalo laga waydiiyay xilkaqaadistii lagu sameeyay Khadar Xaaji Mire.
Wararkii: Kulanka Garoowe
Garowe: Cali Cabdi Awaare oo golaha hortooda Su'aalo lagu waydiiday.
Caasha Geele oo xasuusisay Golayaasha dawlada in ay sugayaan kumaankun oo masaakiin ah.
Madaxwaynaha DGPL Gen: Cade Muuse oo Sabtidii [Jun 23, 2007] Su'aalo laga waydiiyay xilkaqaadistii lagu sameeyay Khadar Xaaji Mire sababata aad u soo celisay iyo sharciga aad uu u cuskaday oo wax laga waydiiyay ayuu Cade Muuse ku sheegay in ay markii horeba ahayd sharci daro oo aan meesha xilka looga qaaday Duqa uusan isaguba joogin islamarkaana aysan joogin masuuliyiinta Wasaarada Dawladaha Hoose taasina ay tahayba in xilka laga qaado sharci daro.
Mas'uul ka tirsan Golaha wakiilada ayaa soo booday oo yiri waxaad noo sheegtaa halka ay kaga taalo Dastuurka hadii aysan meesha joogin masuulyiiinta dawladaha hoose iyo Duqa Degmada xilka lagama qaadi karo.
Madaxwaynaha oo su'aashaas si kale u dhigaya ayaa yiri maya Dastuurku sidaas ma qabo lakiin wixii amaanka wax u dhimaya waan ka hor imaanaynaa mana aqbalayno in amaanka Puntland la waxyeeleeyo.
Xildhibaan kale ayaa yiri hadii Golaha deegaanka degmada Bosaso ay duqa Degmada Xilka kaqaadaan ma amaankaa wax loo dhimayaa mise Golaha degmada Bosaso ayaa ah kuwo amaanka wax u dhimaya.
Cade Muuse ayaa yiri qaar ka mid ah Golaha deegaanka degmada Bosaso ayaa ku xiran kooxaha jooga Asmara iyaga ayaana wada in amaanka wax loo dhimo anaguna waan ku garanay waana ka hortagnay waana uga dignay in ay mar danbe sidaas yeelaan oo ay kooxo argagixiso ah laaluush ka qaataan.
Madaxwaynaha ayaa sidoo kale la waydiiyay waxa uu kaga duwan yahay Khadar Xaaji Mire Gudoomiyayaashii hore ee xilalkoodii ay ka xayuubiyeen Golayaasha degmoyinka ay ka soo jeedaan.
Madaxwaynaha ayaa ku jawaabay kuwaasi waxaa lagu qabtay ama lagu soo eedeeyay danbiyo ay galeen laakiin Khadar wax danbi ah laguma hayo been bay ahayd wixii laga qoray oo dhan waana ogaanay markaan baaritaan ku samaynay Hada laga bilaabana wax walba oo dhaca waan daba galaynaa mana ka yeelayno in kooxo dalka danbi ka galay in ay siday rabaan naga yeelaan waan ka hortagaynaa waana la dagaalamaynaa idinkana waxaa la idin karaba in aad saas nala garataan oo nala qaadataan hadaad tihiin Baarlamaankii la soo doortay oo sharciga ahaaa waana idiin hanbalyaynayaa shaqdiina wata waadna mahadsantihiin.
Madaxwaynaha DGPL Gen: Cade Muuse ayaa markaa ka dib ka baxay Hoolkii baarlamaanka isaga oo sheegay in meel looga yeeray sidaasna kaga fakaday Su'aalihii la waydiin lahaa hadayba u hareen Su'aalo kale oo la waydiin lahaa.
Wasiirka Dawladaha Hoose iyo Horumarinta Reer Miyigi Cali Cabdi Awaare ayaa Sabtidii [June 23,2 007] hor yimid Golaha Baarlamaanka DGPL halkaasi oo wasiirka lagu waydiiyay su'aalo qaarkood uu wasiirku baal maray.
Wasiirka ayaa markii ugu horaysayba la waydiiyay Su'aal ahayd sababta keentay in aad sharcigii Golaha degaanka oo uu baarlamaanku dajiyay aad u jabisay maxay tahay.
Wasiirka oo hadalka la gabanaya ayaa ku jawaabay waxaan sidaas u yeelay in laga fogaado khilaafka ka dhexyimaada golayaasha deegaanka iyo qancin lagu qancinayo beelaha wada daga degaanka sidaasna ay nagu kaliftay in aan ku xalino.
Wasiirka ayaa markale lagu celiyay, maxaad sharciga u horkeeni wayday si Golaha wakiilada ay uga doodaan arimahan.
Wasiirku su'aashaas danbe kama jawaabin laakiin hadalkii isaga oo sii wata iskana dhigaya nin wayn oo gole la soo istaajiyay waxa uu ku qurxisaday hadalkii: rag ka mid ah Golaha Baarlamaanka ayaa ka mid ah raga galay golaha deegaanka qaar ka mid ah degmooyinka Puntland iyaga ayaana sidaas igula taliyay in lagu badiyo dagmooyinka qaar.
Si kastaba ha ahaatee wasiirka dawladaha hoose iyo horumarinta reer miyigi Cali Cabdi Awaare ayaa Su'aalihii la waydiiyay oo dhan aamus ugu jawaabay waxana uu inta badan hadaladiisa dusha ka saaray Golaha baarlamanaku in ay lug ku leeyihiin eedaymihiisa.
Wasiirka ayaa la filayaa in mar kale la soo hor istaajiyo Golaha wakiilada si loo waydiiyo Su'aalo kale oo la xiriirta wasaaradiisa iyo khaladaad badan oo uu wasiirku galay intii uu xilka hayay.
Wasiirka haweenka iyo qoyska Mrs Caasha Geele Diiriye ayaa inta ay is haynwayday xili dood kulul oo buuq iyo sawaxan ka dhex dhalisay labada Gole ee Baarlamaanka iyo Golaha xukuumada inta ay is taagay waxay sheegtay in aan meesha loo imaan buuq iyo qaylo balse loo yimid in wax la is waydaarsado islamarkaana wax la isla qabto oo la iska daayo khilaafka isla markaana dhagaha ugu riday labadii gole ee dawlada in Puntland ay ku nool yihiin qoysas tabaalaysan oo masaakiin ah iyo kuwo kale oo agoomo ah kuwaas dhamaantoodna ay idinka isin sugayaan oo ay idiin soo doorteen in aad wax u qabataan ee idiinma aysan soo dooran in aad idinku isku qaylisaan oo aad isku buuqdaan.
Caasha Geele oo ka hadlaysay xarunta Golaha wakiilada Puntland xili labada Gole ee Puntland uu hareeyay buuq iyo sawaxan ayaa sidoo kale sheegtay in aysan u doodayn oo kaliya haweenka balse ay rabto in la fuliyo Balanqaadkii madaxwaynaha DGPL kaasi oo ahaa in haweenka puntland la shaqaalaysiinayo 20% waxayna sheegtay in ay runta tahay in laga dhabeeyo hadalka madaxwaynaha oo aan lala yaabin 7 haween ah oo ay ka shaqaalaysay in ay ka shaqeeyaan dhawr wasaaradood iyo kuwo kale oo ay wasiiradu sheegtay in ay ku dartay Golayaasha degmooyin.
waxayna sheegtay in aan mar walba farta lagu fiiqin dhawrka haweenka ah ee fara ku tiriska ah ee ka shaqeeya wasaaradaha balse loo hogaansamo danta guud si wada jir ahna wax looga qabto horumarka dalka iyo dadka dhamaana loo adeego rag iyo haweenba si simana wax loogu qabto.
wixii war ee ku soo kordha kalfadhiga Puntland kala soco insha alaah webkaan.